Global Voices teny Malagasy · admin – Avrily 2018
admin · Avrily, 2018
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Avrily, 2018
Azia Atsinanana28 Avrily 2018
Mediam-bahoaka26 Avrily 2018
Natomboky ny Fikambanana Orizonturi (Fikambanana Fara-vodilanitra amin'ny teny gasy) tamin'ny fararano lasa teo ny tetikasa, izay vatsian'ny Rising Voices ara-bola. Manampy ny olona manana olana ara-tsaina ny fikambanana, izay manana ny foibeny ao Câmpulung Moldovenesc, Romania efa ho 15 taona izay.
FOKO: Manao zavatra betsaka ho an'ny fiarahamonina
Mediam-bahoaka25 Avrily 2018
Na dia maro tamin'ireo mpikambana ao amin'ny FOKO aza no nanomboka nianatra tany amin'ny Oniversite, feno hetsika ny volana Aprily ho an'ny Klioba Bilaogy FOKO. Joan Razafimaharo mamintina ny sasany amin'ireo hetsiky ny vondrom-piarahamonina izay andraisan'ireo bilaogeran'ny FOKO anjara.
Raha nanontanian'ny mpihaino tao amin'ny Fihaonamben'ny Global Voices tao Budapest, Hongaria hoe "ahoana no ahafahanay manampy?", nilaza i Mialy Andriamananjara ao amin'ny tetikasa FOKO Madagascar fa fahaizana fa tsy vola no tena ilain'ny tetikasa.
Mediam-bahoaka20 Avrily 2018